जन-आ,क्रोश ” कुलमानलाई भ्र,ष्ट्राचारको आ,रोप लगाएर निकाल्न खोज्ने सांसद बिरुद्ध सडकमा उत्रिने चे,तवानी : सबैले हेर्नुहोस र सक्दो शेयर गरौ!
हिजो संसदीय लेखा समितिको बैठकमा संसदहरुले नेपाल विद्युत प्राधि क,रणका कार्यकारी नि,र्देशक कुलमान घिसिङलाई ९ अर्ब बक्यौता रकम उठाउन नसकेको भन्दै उनैले खाएको जसो गरेर भ्र,ष्ट्राचार ग रे को आ,रोप लगाए । उनीहरुले अ?ख्तियारलाई मु,द्दा चलाउन निर्देशन दिए । त्यस्तै पूर्व कार्यकारी निर्देशकलाई पनि मु,द्दा दा,यर गरी का,रवाही गर्न भनेको छ ।
२० घण्टा सम्म लोडशेडिङ गरी राजधानी लगायत नेपाल भरीका जनतालाई अ,न्धकारमा राख्ने विद्युत प्राधि क,रण जब कुलमान घिसिङ आउनु भयो त्यसपछि विस्तारै देशलाई लो,डसेडिङ मुक्त गराउन सफल उनै घिसिङ हुनुहुन्छ ।
उहाँलाई नेपाली जनताले मुलुकको रियल हिरो भनेर बखान गरिरहेका छन् । तर बक्यौत नहुठ्नुलाई भ्र,ष्ट्राचार जस्तो ग,म्भिर आ,रोप लगाउने नेपाली कांग्रेसका नेता डा. मिनेन्द्र रिजाल लगायत थुप्रै नेपाली कांग्रेसका सांसदहरु छन् ।
उनीहरुलाई अहिलेको नेपाली जनताले खुबै आ,लोचना गरिरहेका छन् । कुलमान जस्ता देशका नायकलाई समेत काम गर्ने वाताबरण नदिने र अझै नेपाललाई अ,न्धकार बनाउँने खेल भइरहेको जनताहरुको आ,क्रोश छ । अन्यायपूर्ण आ,रोप लगाए नेपाल विद्युत प्राधि क,रणबाट कुलमान घिसिङलाई हटाउने ष,ड्यन्त्र भइरहेको जनताको बुझाई छ ।
यसैले अहिले सामाजिक सञ्जालमा कुलमानलाई ह,टाउँन खोजियो भने ३ करोड जनता सडकमा उत्रिन बा,ध्य हुने घो,षणा जनताले स्वस्फुर्त गरिरहेका छन् । आ,रोप सुरु गर्ने कांग्रेस नेता मिनेन्द्र रिजालको चर्को बि,रोध समेत गरिरहेका छन् ।